Nagarik News - केदारनाथको शिर डोलेश्वर
होमपेज / नागरिक शनिबार / केदारनाथको शिर डोलेश्वर
केदारनाथको शिर डोलेश्वर	20 Jul 2013 ५ श्रावण, २०७०
राजु नेपाल	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
डोलेश्वर महादेव भक्तपुरको सिपाडोल गाविसमा पर्छ। काठमाडौंबाट अरनिको राजमार्गमा करिब १५ किमि गएपछि भक्तपुरको जगाती भन्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँबाट करिब ४ किमि दक्षिण पूर्वमा डोलेश्वर मन्दिर छ। बाटो सानो र कच्ची हुँदा साना सवारी साधनलाई बर्सात्मा अलि गाह्रो हुनसक्छ। समग्रमा त्यहाँसम्म पुग्न त्यति गाह्रो छैन। सार्वजनिक सवारी साधनबाट जाँदा भने जगातीको केदारनाथ चोकबाट हिँड्नुपर्छ। काठमाडौंका देवालय, शिवालयको धेरै प्रचार भइसक्दा पनि प्राचीन र अत्यन्त पवित्र डोलेश्वर पुण्य भूमिबारे धेरैलाई थाहा थिएन। यसो हुनुमा पनि कारण छ, किंवदन्तीअनुसार महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरू स्वर्ग जान लाग्दा केदारनाथको दर्शन गर्न गए, तर भगवानले आफ्ना सन्तान नाश गरेर आएका भनी उनीहरूलाई दर्शन दिन चाहनुभएन। भगवानले त्यसपछि राँगो रूप धारण गरी त्यहाँबाट भाग्न खोज्दा भीमले पुच्छर समाते, शिर भने उछिट्टियो। कलियुगमा गएर त्यो शिरबारे जानकारी हुने विश्वास भएअनुसार अहिले पत्ता लागेको मानिन्छ। त्यो शिर नै डोलेश्वर भएको मान्यता छ। त्यसैले यसलाई भारतको उत्तराखण्डस्थित केदारनाथजीको शिरोभाग पनि भनिन्छ। हालै भारतको उत्तराखण्डमा बाढीले धेरै भाग र मठ मन्दिर विनाश गर्दा पनि केदारनाथ मन्दिरलाई केहि भएन। जबसम्म भगवानको शिरको मन्दिरलाई केही हुन्न तबसम्म केदारनाथ मन्दिरलाई केही नहुने विश्वास लिइएको छ। यसै कारण पनि केदारनाथको पूजा नियमित नहुँदासम्म भक्तपुरको यही मन्दिरमा केदारनाथका मुख्य पुजारीको अनुरोधमा केदारनाथको नियमित पूजा भइरहेको छ। २००९ को अगस्टमा केदारनाथ पीठका मुख्य पुजारी श्री १००८ जगत गुरु भीमाशंकरले मन्दिरको मुख्य द्वारमा रहेको शिलालेख अनावरण गरी यो मन्दिर नै केदारनाथको शिर भएको पुष्टि गर्नुभएको थियो। त्यही बेला उहाँले मन्दिरमा रुद्राभिषेक पूजा सुरु गर्नुभएको थियो।गुम्बज शैलीमा बनेको डोलेश्वर मन्दिर आकर्षक छ। यसलाई विमलेश्वर र सिपारे महादेव पनि भनिन्छ। मन्दिरभित्र सादा ठूलो शिवलिंग छ। छेउछाउमा धारा, घन्ट र अन्य कलात्मक वस्तु छन्। शिवरात्रि र बालाचतुर्दशीका अवसरमा यहाँ श्रद्धालुको भीड लाग्छ। साउन महिनाभर डोलेश्वरमा जल चढाउन भक्तहरूको घुइँचो हुन्छ। मन्दिरबाहिर फूलपाती र खाजा बेच्ने स–साना पसल छन्। मन्दिर परिसरमा धारा, भजन घर आदि छन्। धेरै भौतिक पूर्वाधारका काम हुन बाँकी छ। सरकारी र निजी स्तरमा गुरु योजनाअनुसार काम सुरु भइरहेको छ। अरनिको राजमार्गको केदारनाथ चोकबाट मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो त्यति राम्रो नहुनु, ठाउँ–ठाउँमा दुई वटा सवारी सधान पास हुन गाह्रो हुनु, मन्दिरसम्म सार्वजनिक सवारी साधन नचल्नु अनि वरपर भौतिक पूर्वाधार विकासमा कमीले तीर्थयात्रीलाई असुविधा पुग्ने देखिन्छ। मन्दिरबारे जति प्रचार हुँदै जान्छ त्यति नै तीर्थयात्री संख्या बढ्ने भएकाले चाँडै पूर्वाधार विकासमा जोड दिन जरुरी देखिन्छ। Tweet Leaveacomment Message *
नेपालका म्याराडोनादक्षिण अमेरिकी खेलाडी म्याराडोना सन् १९८० को दशकमा विश्व फुटवलमा ‘वादशाह' उन्मुख नाम थियो। ठिक त्यहि समयमा मणि विक्रम शाहले नेपाली दर्शक दिर्घाबाट ‘म्याराडोना' को उपाधि पाइरहेका थिए।	किसिम किसिमका पाठक‘दमिनी भीर' पढिसकेपछि गोरखाकी पाठक पुष्पा केसीले मसँग निक्कै घच्चीका मत राखिन्। उनको जोड थियो, ‘तपाईंको उपन्यास पढिसकेँ। राम्रै लाग्यो तर ‘लभ' पुगेन।	मेरो पोखरापोखरालाई पोखरेली आँखा लाइहेरआफ्नो धर्ती आकाशको गीत गाइहेरमरेपछि कहाँ खोज्नु स्वर्ग शून्यतामाजिउँदैमा दिव्यताको भाव छाइहेरमाछापुच्छ्रे अन्नपूर्णा हिमालका काखहराएमा मुटु अन्त फेरि पाइहेरप्रकृति र संस्कृतिको स्वच्छ दोभानमाविश्व सारा समेटिई यहीँ आइहेर।	दयावान् दयारामबिहीबार दिउँसो १२:१० बजे।आदर्श सौलः युवक उच्च मावि, बुङ्मति, ललितपुर।एक सुस्त बालक विद्यालय प्रांगणमा धसि्रँदै यताउता गरिरहेका छन्। मुखको कुनाबाट अविरल र्‍याल बगिरहेको छ, तर पुछ्न सक्दैनन् या जान्दैनन्। शारीरिक...	गुन्डागिरीको चिन्तामा ब्यवसायीकुख्यात गुन्डा दिनेश अधिकारी 'चरी' र राधे भण्डारीबीचको आक्रमण/प्रत्याक्रमण तथा ललितपुरको धापाखेलमा मीनकृष्ण महर्जनमाथि भएको गोली प्रहारको घटनालाई प्रहरीले 'डन संस्कृतिको पुनरोदय'का रूपमा लिएको छ। प्रमुख दलहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने...	एउटा त्रिपालको मनोलापजिल्ला सदरमुकाम गोरखाको एउटा अँध्यारो गोदाममा निसास्सिएर बसेका बेला घर्याभक्क गर्दै ढोका खुल्यो। अन्धकारलाई चिर्दै सुनौलो प्रकाश मलाई छुँदै कोठाभरि फिँजियो। हल्का महसुसमात्रै गर्दै थिएँ, युनिसेफका कर्मचारी र केही मानिस...	बुढ्यौलीमा तन्नेरी जोसत्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. प्रेम शर्मा फुर्सद मिल्नेबित्तिकै डाँडापाखा चहार्छन्। कहिले विद्यार्थीसँग, कहिले पत्रकारसँग अनि कहिले अरूसँग। अनुसन्धान गर्न २०४३ सालदेखि घुम्न थालेका। ५ वर्षयता भने...	थोते साइँलोथोते साइँलो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुब्बासँग बाझिरहेको छ। थोते साइँलोको असली नाम गोविन्द लिम्बू हो। उसले नसुन्ने गरी अरूले ‘थोते साइँलो' भन्छन्। मान्छेले आफूलाई थोते भन्छन् भन्ने उसलाई पनि थाहा...	नागरिक शनिबार	कम्प्युटरको देवत्वकरणठमेलको पुराना पुस्तक बेच्ने पसलबाट ल्याएको एउटा चाङमा पातलो म्यागेजिन भेटियो। त्यो 'स्मरण' नामक कम्प्युटर विशेषांक...	खण्डहरमा कला पछ्याउँदैदोलखा, गैरीमुदीका छविलाल श्रेष्ठ गाउँमा आएका केही कलाकारसँग मिलेर केही फरक काम गर्दै थिए। गाउँमै उपलब्ध...	जिन्दगीको ओखतीपरदेशीले बाटो नाप्यो छाप छाडेर पाउकोकोइ छौ कि औषधी गर्ने जिन्दगीका घाउकोसुदूरपश्चिममा युगौदेखि सुनिँदै आएका कतिपय...	घरभित्रै क्रान्तिशितलहर परेर बाहिर मौसम साह्रै चिसिएको छ। 'मैले लगाउन मिल्ने कपडा र जुत्ता ल्याउन नभुल्नु है...	भर्खरै...